သူတောင်းစား အဘိုးအိုကြီး က ဘဝတူကလေးကို ဆုံးမလိုက်တဲ့ ဆုံးမစာ….။ – Lawkathuta
သူတောင်းစား အဘိုးအိုကြီး က ဘဝတူကလေးကို ဆုံးမလိုက်တဲ့ ဆုံးမစာ….။
ဗဟုသုတအစုံ May 6, 2018
တစ်ခါတုန်းက လမ်းဘေးက အဘိုးအို တစ်ယောက်က သူနဲ့ဘဝတူချင်း ဖြစ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ပြောပြဖူးတယ်ပုံပြင်လေးရဲ့နာမည် ကကိုယ်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးရင်ရှုံးနိမ့်ရတယ်တဲ့
ဟိုတုန်းကမြို့တစ်မြို့မှာ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ သူဋ္ဌေးသား တစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
သူဋ္ဌေးသား က အသက်ကလည်းငယ် ဘွဲ့ရ ပညာတတ်ဆိုတော့ မာန်မာနလေးတွေ ရှိနေတာပေါ့ !
သူဋ္ဌေးသား ဆိုတဲ့အတိုင်း အလုပ် ကလည်းမလုပ်….
တစ်နေ့တစ်နေ့ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်ပါးနေတာ အချိန်တွေ ကုန်လာလိုက်တာ မိဘတွေတောင် နောက်ဆုံးအချိန်ကို ရောက်လာ ပါလေရော!
ဒါနဲ့ အိပ်ယာထဲ လှဲနေတဲ့မိဘတွေက သူတို့သားကို အလုပ်လုပ်ဖို့ ပြောပေမဲ့ သားကမလုပ်ဘူး။
နောက်တော့ မိဘ တွေသေတယ်ဆိုပါတော့!
မိဘ တွေကလည်း သေ သားကလည်း အပေါင်းအသင်း တွေနဲ့ ဟေးလာ ဝါးလာလုပ်နေတာ မိဘတွေရှာထားတဲ့ စည်းစိမ်တွေ ပြုတ်တဲ့အထိဆိုပါတော့ !
နောက်တော့ပိုက်ဆံမရှိတော့ အိမ်ပေါင် အိမ်ရောင်း လုပ်ပြီးနေလာလိုက်တာ! နောက်ဆုံး နေစရာမရှိ ဖြစ်သွားတော့တယ်။
နောက်တော့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ အလုပ် လုပ်မယ်ဆိုတော့လည်း သူဋ္ဌေးသားဘဝနဲ့ မောက်မောက်မာမာ နေလာတော့ သူတစ်ပါး စီမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ !
အဲဒါနဲ့ ကလေးက”အဘိုးတဲ့ အဲဒီသူဋ္ဌေးသားက နောက်တော့ ဘာဖြစ်သွားလဲတဲ့” မေးတော့ အဘိုးအိုက ရယ်ပြီးတော့” အဲဒီသူဋ္ဌေးသားက သူတောင်းစား ဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ်”လို့ပြောလိုက်တယ် ။
ဒါနဲ့ အဘိုးအိုက” ကလေးတဲ့အဲဒီသူဋ္ဌေးသားက ဘယ်သူလဲဆိုတာ မသိချင်ဘူးလားတဲ့ ? ” ကလေးက လည်း “သိချင်တယ်” ပေါ့
အဘိုးက ကလေးတဲ့” တကယ်တော့ အဲဒီသူဋ္ဌေးသားက တခြားသူ မဟုတ်ဘူးတဲ့ အဘိုးပဲ” လို့ ပြောလိုက်တော့ ကလေးက အရမ်းအံ့သြသွားတာပေါ့ !
အဘိုအိုးက ထပ်ပြောပြန်တယ် ကလေးတဲ့ “လောကမှာဆင်းရဲလို့လဲ စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ ချမ်းသာလို့လဲ မာန်မတတ်နဲ့ ” တဲ့….
ခြေ၊လက်ကောင်းတွေ ရှိပါလျက် အလုပ်မလုပ်လိုပဲ မိဘများကို အားကိုးနေသူများ ဘဝင်မြင့်၍ ဘဝကိုပေါ့စစွာ နေတတ်သူတွေ အတွက် သင်ခန်းစာလေးမို့ မေတ္တာဖြင့် မျှဝေတာပါ…။
စာဖက်သူ ချစ်မိတ်ဆွေအားလုံး ကျန်းမာ၊ချမ်းသာကြပါစေ…
credit. Machit Mg
တဈခါတုနျးက လမျးဘေးက အဘိုးအို တဈယောကျက သူနဲ့ဘဝတူခငျြး ဖွဈတဲ့ ကလေးတဈယောကျကို ပုံပွငျတဈပုဒျ ပွောပွဖူးတယျပုံပွငျလေးရဲ့နာမညျ ကကိုယျကိုကိုယျ အထငျကွီးရငျရှုံးနိမျ့ရတယျတဲ့
ဟိုတုနျးကမွို့တဈမွို့မှာ အရမျးခမျြးသာတဲ့ သူဋ်ဌေးသား တဈယောကျ ရှိခဲ့ဖူးတယျ။
သူဋ်ဌေးသား က အသကျကလညျးငယျ ဘှဲ့ရ ပညာတတျဆိုတော့ မာနျမာနလေးတှေ ရှိနတောပေါ့ ! သူဋ်ဌေးသား ဆိုတဲ့အတိုငျး အလုပျ ကလညျးမလုပျ…..
တဈနတေ့ဈနေ့ အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ ပြျောပါးနတော အခြိနျတှေ ကုနျလာလိုကျတာ မိဘတှတေောငျ နောကျဆုံးအခြိနျကို ရောကျလာ ပါလရေော!
ဒါနဲ့ အိပျယာထဲ လှဲနတေဲ့မိဘတှကေ သူတို့သားကို အလုပျလုပျဖို့ ပွောပမေဲ့ သားကမလုပျဘူး။
နောကျတော့ မိဘ တှသေတေယျဆိုပါတော့!
မိဘ တှကေလညျး သေ သားကလညျး အပေါငျးအသငျး တှနေဲ့ ဟေးလာ ဝါးလာလုပျနတော မိဘတှရှောထားတဲ့ စညျးစိမျတှေ ပွုတျတဲ့အထိဆိုပါတော့ !
နောကျတော့ပိုကျဆံမရှိတော့ အိမျပေါငျ အိမျရောငျး လုပျပွီးနလောလိုကျတာ! နောကျဆုံး နစေရာမရှိ ဖွဈသှားတော့တယျ။
နောကျတော့ ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးနဲ့ အလုပျ လုပျမယျဆိုတော့လညျး သူဋ်ဌေးသားဘဝနဲ့ မောကျမောကျမာမာ နလောတော့ သူတဈပါး စီမှာ အလုပျလုပျဖို့လညျးမဖွဈနိုငျဘူးလေ !
အဲဒါနဲ့ ကလေးက”အဘိုးတဲ့ အဲဒီသူဋ်ဌေးသားက နောကျတော့ ဘာဖွဈသှားလဲတဲ့” မေးတော့ အဘိုးအိုက ရယျပွီးတော့” အဲဒီသူဋ်ဌေးသားက သူတောငျးစား ဖွဈသှားတာပေါ့ကှယျ”လို့ပွောလိုကျတယျ ။
ဒါနဲ့ အဘိုးအိုက” ကလေးတဲ့အဲဒီသူဋ်ဌေးသားက ဘယျသူလဲဆိုတာ မသိခငျြဘူးလားတဲ့ ? ” ကလေးက လညျး “သိခငျြတယျ” ပေါ့
အဘိုးက ကလေးတဲ့” တကယျတော့ အဲဒီသူဋ်ဌေးသားက တခွားသူ မဟုတျဘူးတဲ့ အဘိုးပဲ” လို့ ပွောလိုကျတော့ ကလေးက အရမျးအံ့သွသှားတာပေါ့ !
အဘိုအိုးက ထပျပွောပွနျတယျ ကလေးတဲ့ “လောကမှာဆငျးရဲလို့လဲ စိတျဓာတျမကနြဲ့ ခမျြးသာလို့လဲ မာနျမတတျနဲ့ ” တဲ့
ခွေ၊လကျကောငျးတှေ ရှိပါလကျြ အလုပျမလုပျလိုပဲ မိဘမြားကို အားကိုးနသေူမြား ဘဝငျမွငျ့၍ ဘဝကိုပေါ့စစှာ နတေတျသူတှေ အတှကျ သငျခနျးစာလေးမို့ မတ်ေတာဖွငျ့ မြှဝတောပါ
စာဖကျသူ ခဈြမိတျဆှအေားလုံး ကနျြးမာ၊ခမျြးသာကွပါစေ…
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းအရာတချို့
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ဆိုတာ ၁၉၃၉ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၄၅ခုနှစ်အတွင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့သော စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ မဟာမိတ်နိုင်ငံများ နဲ့ ၀င်ရိုးတန်း နိုင်ငံများရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ မဟာမိတ်တို့ဘက်မှ အမေရိကန် ၊ ဆိုဗီယက် ၊ ဗြိတိန် တို့ကဦးဆောင်ပြီး ၀န်ရိုးတန်းနိုင်ငံတွေကတော့ ဂျာမဏီ ၊ ဂျပန် နဲ့ …
အိပ်ရာကနိုးနိုးချင်း မလုပ်သင့်တဲ့အရာများ 1. နှိုးစက်ကို ပြန်ပိတ်ပြီး အိပ်စက်ခြင်း – နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အချိန်မှန် အိပ်စက်၍ အချိန်မှန် နိုးထခြင်းဖြင့် ကောင်းစွာ အနားရနိုင်ပါတယ်။ 2. အိပ်ရာမှ အမြန်ထခြင်း – လှဲနေရာမှ ရုတ်တရက် မတ်တတ်ရပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သွေးတွေဟာ ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားကြောင့် ခြေထောက်ဆီသို့ စီးဆင်းသွားတာကြောင့် …
တစ်ပတ် ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် တစ်ကိုယ်တော် လိင်စိတ်ဆန္ဒဖြေဖျောက်ခြင်း ပြုလုပ်သင့်သလဲ..?
အမျိုးမျိုးသော လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ တစ်ကိုယ်တော် လိင်စိတ်ဖြေဖျောက်ခြင်းဟာ အတူနေချစ်သူ မရှိသူများအဖို့တော့ အခြေခံလိုအပ်ချက် အများကြီးထဲမှာ တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်းပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ကျင့်သုံးနေကြတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများရော အမျိုးသားများရော နှစ်ဦးစလုံးပါ တစ်ကိုယ်တော် လိင်စိတ် ဖြေဖျောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် လူအချို့ကတော့ …
A Costa Rican banknote for five colones. It shows Rafael Yglesia Castro, president of Costa Rica from 1894 to 1902 andaGuaria Morada orchid, …
လူသားတို့မကျင့်အပ်သောအရာ( ၅ ) ပါး
လူသားတို့မကျင့်အပ်သောအရာ( ၅ ) ပါး °°°°°°°°°°°°° ၁။ ခြင်္သေ့လိုလဲ မဟောက်နဲ့ ၂။ ဖားငယ်လိုလဲ မကြောက်နဲ့ ၃။ တောင်လိုလဲ မမောက်နဲ့ ၄။ မြစ်လိုလဲ မကောက်နဲ့ ၅။ တွင်းလိုလဲ မစောက်နဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့၏ အင်္ဂါ ( ၄ ) …